Ramaddii Kubbaa Miilaa Liigii Shaampiyoona Awrooppaa - Gaachana Sabaa
August 25, 2017 August 28, 2017 Gaachana Sabaa
Taphni Shampiyoon Liigii bara kanaa kan 2017-2018 haala addaaatiin garee Arsenal malee kunoo as gahee ramaddiinis akka armaan gadiitti bahee jira.Bara kana kakannaan deeggartoota Arsenal kan bara dheeraa kan dhumate yeroo tahu deeggartoota Manchester Unitediif immoo turtii waggaa lamaa booda waan taphichatti deebihaniif gammachuu guddaa akka qaban tilmaamuun nama hin dhibu.
Akka deeggartoota Manchester United tokko tokko irraa dhageenyetti kan gammachuu keenya haalaan guddisemmoo “Arsenal Shaampiyoon Liigii irraa bahuu isaati jedhu”.Deeggartootni Arsenaalis kan isaan gubu gareen Joosee Shaampiyoon Liigiitti deebihuu akka tahe beekamaadha.
Taphni kubbaa miilaa tapha Isportii jiran keessaa kan baayyee jaallatamuufii ilaalamu yoo tahu warra taphicha keessa jiraniif akka armaan gaddiitti fulbaana dhufuuf ramaddiin isaanii baheera.
Manchester United hafiinsa waggaa lamaa booda Shaampiyoona Awrooppaa moo’atanii dhufuudhaan Garee A keessatti ramaddii jalqabaa tahuun garee salphaatu isaan qunname. Chelsea’n ammoo Shaampiyoona premier League waan tahaniif garee C dursuudhaan Atiletico Madrid waliin dorgommii guddaa akka godhuuf deeman beekamaa dha.
Liverpool,Manchster City,akkasumas Tottenham haala walfakkaatuun garee E,F fi H tti ramadamaniiru.Barcelona fi Bayern ammoo garee jabaa waliin D fi B tti ramadamaniiru.Real Madrid abdii moo’annaa isaanii dhoowwachuuf kan taphatan yeroo tahu garee H dursuun ramadamaniiru.gareen isaanii kun garee du’aa jedhameera.
Ramaddiiwwan kana keessaa tapha daawwachuu qabdu.
← U.N. Security Council Approves New Sanctions on North Korea
Floyd Maymoneyweather beats McGregor to breack Rocky Marciano’s record →